B2B Kushambadzira Ongororo: 9 Bhenefiti yeSocial Media Kushambadzira | Martech Zone
B2B Yekushambadzira Ongororo: 9 Bhenefiti yeSocial Media Kushambadzira
Chikwata kuReal Bhizinesi Kununura chave kuchipa iyi data pa Mashandiro anoita B2B Mabhizinesi Ekutarisana NemaMedia Media Kwemakore mashoma ikozvino uye ndavandudza iyo yegore ra 2015. Tsvagurudzo yacho inopa mamwe matanho ehuwandu hweB2B yemagariro enhau kushambadzira kugamuchirwa uye inonongedzera kune gumi mabhenefiti ayo makambani eB9B ari kuona:
Ita vateveri vakavimbika
Ipa nzwisiso yemusika
Natsiridza kutsvaga masosi
Kukura kudyidzana kwebhizinesi
Deredza kushambadzira mari
Izvo hazviwane chero chakajeka kupfuura icho. Ini ndichiri kutenda kuti makambani eB2B ari kunyanya kurerutsa kureba kwenguva refu iko kushambadzira kwemagariro enhau kuri munzvimbo zhinji. Ndakatendeka kushamisika kuti pasocial network yakanga isiri bhenefiti yakanyorwa - asi pamwe kukura kwako pasocial network kunowira pasi pekuratidzwa uye kudyidzana kwebhizinesi. Pasina kupokana kuti makambani anoramba achitaurirana nesu anowana kuwanda kwakawanda kupfuura avo vanotibata nesu kamwe uye vobva.
Iyo nguva yeB2B inowanzo kusiirwa kune tarisiro kana mutengi, kwete iyo yekutengesa kutenderera kana kushambadzira nguva yemushandirapamwe wesangano. Nekuda kweizvozvo, zvinoda kuti mabhizinesi anyatso kukura nekuchengetedza masimba avo mumasocial media. Ramba uchipa kukosha uye iwe uchavaka hukama hwakakosha.
Tags: b2b kushambadzirab2b kushambadzira mabhenefitib2b yemagariro enhau kushambadzira mabhenefiti
Yakanaka infographic nezvesocial media.
Munguva yedhijitari, midhiya yemagariro inofanirwa kushandisa kumhanyisa chero mabhizinesi anosanganisira ese ari maviri bhizinesi repamhepo uye bhizinesi rekunze. Uye chengetedza hukama hwakanaka kune vatengi.